उम्मेदवार, नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा,काठमाडौं क्षेत्र नं ३
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेत लामो समयदेखि कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । नेपाल महिला संघकी पूर्व अध्यक्ष समेत रहेकी बस्नेत मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएकी छन् । पहिलो पटक मन्त्री बनेर सहकारी क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसंगति हटाउन नयाँ सहकारी ऐन ल्याएर यस क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएकी बस्नेतको चुनावी रणनीति, तयारी र अभियानका विषयमा अमरवाणी डटकमले गरेको कुराकानीः
घरदैलो अभियानमा जुटिरहनु भएको छ, कस्तो छ, चुनावी माहोल ?
माहोल राम्रो छ । आममतदाता भोट हाल्न आतुर छन् । निर्वाचनमा सबैको चासो र सचेतनमा वढेको मैले महसुस गरेको छु । निर्वाचन आउन केही दिनमात्र वाँकी छ, हाम्रो घरदैलो कार्यक्रम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आम मतदाता भेटने जनताका समस्या, गुनासा सुन्ने हेर्ने र तिनको पहिचान गर्न चुनावी अभियान अपरिहार्य जस्तो लाग्छ मलाई । चुनावको मुखमा विकासको आश्वासन वाढने तर केही पनि नगर्ने यो मलाइ मन पर्दैन । मैले गर्न सक्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका काम गर्ने वचन दिन्छु । अहिलेसम्मको मूल्याङ्न राम्रो छ, म चुनाव जित्छु ।
यहाँ लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट चुनावी प्रतिशप्रर्धामा हुनुहुन्छ, कसरी आश्वस्त पार्दै हुनुहुन्छ मतदातालाई ?
हो, लोकतान्त्रिक गठवन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । दुनियालाई थाहा छ लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी भनेकै नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बन्यो । हामी अब संविधान कार्यान्वय गर्ने शक्ति हामीलाई दिनुहोस भनेर जनतालाई भोट मागि रहेका छौं । यही हो कांग्रेसको मुख्य राजनीतिक एजेण्डा । संविधान संस्थागत भएपछि आर्थिक सम्बद्धिको हुन्छ हन्छ । लोकतन्त्र विना त्यो संम्भव छैन । लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्यवन आजको आवश्यकता हो । रोजगारी सिर्जना युवा विदेश पलायन रोक्ने र मुलुकको संम्बृद्धि, आर्थिक उन्नति र समानूपातिक विकासका लागि कांग्रेसको नेतृत्व जरुरी छ ।
चुनावको मुखमा विकासको चर्को नारा दिने तर जितेपछि जनताको घरदैलोमा नटेक्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
पक्के पनि जनता अब लाटा छैनन । हामी भन्दा वढी उनीहरुले बुझेका छन् को सही उम्मेदवार को नक्कली उनीहरु मजाले चिन्छन् । मुलुकको पहिलो प्राथमिता संविधान कार्यान्वय नै हो । त्यसपछि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आजको आवश्यकता हुन । त्यसलाई पूरा गर्न कांग्रेस प्रतिवद्ध छ, हामी यी मुद्धाहरु पूरा गर्छौ भन्दै भोट मागि रहेका छौं । मैले यो क्षेत्रमा के गरेकी छु भन्ने मतदातालाई राम्ररी थाहा छ, स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस क्षेत्रमा कांग्रेसले नै जितेको हो । विकास निर्माणका कतिपय काम भइरहेका छन् कति हुँदैन छन् । ढल, खानपानी, सडक यातायात व्यवस्थापनमा विभिन्न काम भएका पनि छन् । यो क्षेत्र प्रचर संम्भावना भएको क्षेत्र हो । पर्यटकीय हिसाबले शहिद पार्क, ऐतिहासिक गोकर्ण, शिवपूरी, कागेश्वरी थुप्रै स्थानहरु छन् तिनलाई हामी प्रचार प्रसारमा ल्याउछौ । मेलम्ची परियोजन यही क्षेत्रबाट पाइपलाइन विस्तार गरिदै छ । ३ ओटा ट्याङ्की यही क्षेत्रमा छन, सुन्दरी जलमा मुख्य ट्ङ्की, अर्को कामनपा ६ नं मा पर्छ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका ९ नं तेस्रो ट्याङी बन्दै छ । मेलम्ची परियोजनाले पहिलो चरणमा रिङ रोड भित्र मात्र पानी वितरण गर्ने योजना छ । हामी कुनैपनि हालतमा यो क्षेत्रमा पानी वितरण नगरी अन्यत्र जान दिदैनौं । यो स्पष्ट छ, म प्रतिवद्ध छु पहिलो चरणमै ३ नम्बर क्षेत्रका वासिन्दालाई म पानी खुवाएर छोड्छु । हिलो, धुलो खाने हामी पानी खाने अरु यो हुनै सक्दैन ।
मेलम्ची परियोजन यही क्षेत्रबाट पाइपलाइन विस्तार गरिदै छ । ३ ओटा ट्याङ्की यही क्षेत्रमा छन, सुन्दरी जलमा मुख्य ट्ङ्की, अर्को कामनपा ६ नं मा पर्छ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका ९ नं तेस्रो ट्याङी बन्दै छ । मेलम्ची परियोजनाले पहिलो चरणमा रिङ रोड भित्र मात्र पानी वितरण गर्ने योजना छ । हामी कुनैपनि हालतमा यो क्षेत्रमा पानी वितरण नगरी अन्यत्र जान दिदैनौं । यो स्पष्ट छ, म प्रतिवद्ध छु पहिलो चरणमै ३ नम्बर क्षेत्रका वासिन्दालाई म पानी खुवाएर छोड्छु । हिलो, धुलो खाने हामी पानी खाने अरु यो हुनै सक्दैन ।
कांग्रेसलाई विपक्षीले एउटा आरोप लगाउने गरेको छ, पटक–पकट बहुमत पाउँदा पनि विकास केही गरेन, के भन्नेहुन्छ ?
कांग्रेसले केही पनि गरेन भन्नेहरुले चाहिँ के गरे ? त्यो जनतालाई भनिदिनु पर्यो । २००७ साल देखि भएका राजनीतिक उपलब्धि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका छन । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन कसले ल्यायो ? आर्थिक उन्नतिका लागि खुला अर्थतन्त्रको विकास कसले गर्यो ? उद्योग, कलकारखाना, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडक सञ्जाल कस्ले बनायो ? नदेख्नेहरुलाई कसरी देखाउने ? कांग्रेसले गरेन भनेर प्रपोगान्डा गर्न जति सजिलो छ, गरेर देखाउन त्यति नै गाह्रो छ । यो कुरा कम्युनिष्टले वुझनु पर्छ कि प्रपोगान्डा गरेर विकास हुँदैन् काम गर्नुपर्छ काम ।
राजनीतिमा महिला समावेशिता नभएको भनिएको छ, तपाईलाई के लाग्छ ?
हो, समग्रमा महिला सहभागीता हुन सकेको छैन् । तर, अरु पार्टीमा भन्दा कांग्रेमै समावेशिता छ । कांग्रेस सचेत छ, प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षमा काठमाडौंका १० ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा खोइ त अरु पार्टीका महिला उम्मेदवार ? यो कुरामा किन मौन छ, वामगठबन्धन ? काग्रेसले २०१५ सालको मन्त्रीपरिषद् समेत समावेशी बनाएको छ । त्यहाँ पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो । महिला आयोग कस्ले बनायो ? दलीत आयोग ? कमैया मुक्ति कसले गर्यो ?
तपाई सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री हुनुहुन्छ ? मन्त्री भएर उल्लेखनीय काम के गर्नुभयो ? म पहिलो पल्ट मन्त्री बनेको हुँ । अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साका रुपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको विस्तार नेपालमा निकै भइसकेको छ । कतिपय राम्रा सहकारी पनि छन् जसले उदाहरणीय काम गरेका छन् । अहिले ३४ हजार सहकारीमा ६२ लाख मानिसहरु आवद्ध छन् । सहकारी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याएको छ । त्यसका वावजुद पनि यो क्षेत्रमा सहकारी ऐनको अभाव खड्किएको थियो । जसको अभावले सहकारीमा हुने ठगी र बदमासी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था थिएन् । मेरो पालामा सहकारी ऐन आयो । यो महत्वपूर्ण काम हो । अव सहकारीमा हुने ठगी नियन्त्रणमा आउने छ । अर्को गरिव घर पहिचान कार्यक्रम हामीले ५१ जिल्लामा विस्तार गरेका छौं । यो गरिवी न्यूनिकरणका लागि महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।
प्रकाशित १२ मङ्गसिर २0७४ , मङ्गलबार | 2017-11-28 02:22:15